Ronaldo oo Real Madrid ugu goodiyay inuu ka tagayo haddii ay Tababare u Magacaabi waayaan….(Ma ahan Klopp, Maya Conte xitaa ma ahan Wenger) – Gool FM
Ronaldo oo Real Madrid ugu goodiyay inuu ka tagayo haddii ay Tababare u Magacaabi waayaan….(Ma ahan Klopp, Maya Conte xitaa ma ahan Wenger)
(Europe) 10 Juunyo 2018. Cristiano Ronaldo ayaa eryan doona riyadiisa inuu dib ugu laabto Manchester United haddii ay Real Madrid magacaabi wayso tababaraha uu isagu doonayo oo waliba ah mid lama filaan ah sida ay sheegayaan warar dhawaan gal ah oo ka imaanaya Spain.
Weeraryahanka Real Madrid ayay ka go’an thaay inuu dib ugu laabto Manchester United sagaal sano kaddib markii uu ka soo tagay Old Trafford.
33-jirka ayaa ka careysan madaxwaynaha kooxda Florentino Perez maadaama uu ku guuldarreystay inuu ka dhigo laacibka ugu mushaarka badan kubbada cagta adduunka.
wararka ayaa tibaaxaya in United ay tahay kooxda kaliya ee dooneysa inay la saxiixato Ronaldo iyo waliba kooxda kaliya uu qudhiisa doonayo inuu ku biiro.
Don Balon ayaa warineysa in Ronaldo uu sida cad ka tagi doono Real Madrid haddii ay magacaabi waayeen macallinka uu isagu doonayo.
Zidane ayaa si lama filaan ah uga tagay Real Madrid shan maalmood uun kaddib markii uu u gacan galiyay Champions League saddexaad oo xiriir ah.
Macallinka reer France ayaa dhisay is fahan dhow oo u dhexeeya isaga iyo Ronaldo isagoona isu daba riday inuu tiisii ugu fiicneyd ka dhalaaliyo xiddiga reer Portugal.
Iminka Zidane tagyay, Ronaldo isna laga yaabee inuu tagol.
Real Madrid ayaa loo saadaaliyay inay xilka bannaan u dhiiban doono Jurgen Klopp ama Antonio Conte.
Laakiin Ronaldo, sida ay sheegeyso Don Balon wuxuu door bidayaa in xilka Bernabeu loo dhiibo Michael Laudrup haddii kale uu kooxda ka tagi doono.
53-jirka horey ugu soo ciyaaray Real Madrid ayaa iminka hor kaca naadiga Al Rayyan ee dalka Qatar.
Yeelkeede, Tababaraha uu doonayo Ronaldo ee Laudrup ayaa wareysi uu bixiyay bishii Feebaraayo ku sheegay inuu waqti dheer ku soo jiray ciyaaraha isla markaana shaqada uu ka hayo Qatar ay noqon karto tiisii ugu dambeysay.
Madaxwaynaha dalka masar: “Mohamed Salah wuxuu u dagaalamayaa sida uu qeyb kaga noqon lahaa kulanka Uruguay”
Mbappé oo ka hadlay dhaawacii xalay kasoo gaaray kulankii saaxiibtinimo ee Mareykanka